सरकारको नीति विपरीत मन्त्रीको विदेशमोहः कृषि मन्त्रालयको जम्बो टोली चीन भ्रमणमा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:५३ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्ने नीति ल्यायो । तर त्यो सरकारी नीतिलाई मन्त्रीहरुले नै उल्लंघन गर्दै आएका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनाल र राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले देखाएका छन् ।
राज्यमन्त्री चौधरीले श्रीमान सन्तोष थारु, सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीसहितको टोली लिएर इटलीको रोम पुगेर फर्किएको हो । उनी फर्किएको १५ दिन नबित्दै कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालसहितको २० सदस्यीय मन्त्रालयको जम्बो टोली चिया तथा कफी विकास बोर्डको खर्चमा चीन जाने तयारीमा छन् । त्यसमा १० जना चिया तथा कफी विकास बोर्ड र राजनीतिक नेता कार्यकर्ता छन् भने मन्त्रालयका १० जना छन् ।
तयारी चिया बजारमा लाने ब्यवसायी चिरन्जीवी दाहालसहित कृषि मन्त्रालयका सहसचिवको टोली भ्रमणमा चीनको सिचुवान प्रान्तको इटिन नगरपालिकामा चियाको अध्ययनका लागि जान लागेको बताइएको छ । भ्रमणमा गुल्मी नेकपाका प्रस्तावित सचिव बुद्धि जीसी र अर्का नेता मधुकृष्ण पन्थी पनि छन् ।
सरकारले अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्ने नीति ल्याउँछ, तर मन्त्रीले नै त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । कृषि मन्त्री खनाल र राज्यमन्त्री चौधरीले पदबहाली गरेपछि नै विदेश भ्रमणलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
२४ औं दिनमा डा. केसीको अनशन स्थगित, सत्याग्रह जारी रहने
काठमाडौँ । प्रा.डा. गोविन्द केसीले २४ औं दिनमा अनशन स्थगित गरेका छन् । आफ्नो १६ औं पटकको अनशन…
काठमाडौं । मुलुकमा चर्चित भनाइ छ– सियो पनि बनाउन नसक्ने देश । हुन पनि हो, नेपालको आयात सूची हेर्ने…
स्मार्ट लाईसेन्समा बेथिति: सरकारको मेसिन थन्क्याएर निजीलाई जिम्मा
काठमाडाैं । सरकारले २०७२ मंसिरदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्ड लाईसेन्समा स्तरोन्नति गर्यो ।
सुरुमा साबिक बागमती अञ्चलबाट सुरु…
उल्लेखित संस्कृत श्लोकहरुले आमा अर्थात…
गौरीकलाको बलात्कारपछि हत्याका अभियुक्तलाई ३२ वर्ष जेल
सुर्खेत । पञ्चपुरी नगरपालिका–३ चौर सुर्खेतकी गौरीकला रोकाया हत्याका तीन जना आरोपितलाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले दोषी ठहर गरेको छ…
चितवनको जुगेडी पुलबाट ट्रक खस्यो, दुई जनाको मृत्यु
चितवन । नारायणगढ–­मुग्लिन सडक खण्डअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका-२९ जुगेडी पुलबाट ट्रक खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । अर्का एकजना…